भारतमा चौथो स्थानमा रहेको बजाज नेपालमा किन पहिलो स्थानमा ? अन्य ब्रान्डको अबस्था के ? | Automotive News Nepal
भारतमा चौथो स्थानमा रहेको बजाज नेपालमा किन पहिलो स्थानमा ? अन्य ब्रान्डको अबस्था के ? २० कार्तिक, २०७७
भारतीय बजारमा हिरो ब्रान्डका मोटरसाइकलको बजार हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । हिरोपछि होन्डा र टीभीएसको बजार दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आउँछ । चौथो र पाँचौ स्थानमा बजाज र यामाहा रहन सफल छन् । भारतीय बजारको यो समिकरण नेपालको सन्दर्भमा भने ठिक उल्टो छ ।
भारतमा चौथो स्थानमा रहन सफल बजाज नेपालमा पहिलो स्थानमा छ भने त्यहाँ पहिलो स्थानमा रहन सफल हिरो पाँचौ स्थानमा । भारतमा दोस्रो स्थानमा रहेको होन्डा नेपालमा समेत दोस्रो स्थानमा छ भने त्यहाँ पाँचौ स्थानमा रहेको यामाहा तेस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी भारतमा तेस्रो स्थानमा रहेको टीभीएस यहाँ चौथो स्थानमा छ । यद्यपि पछिल्लो समय टीभीएसले यामाहासँगको दुरी कम गर्दै लगेको हुँदा यो निकट भबिष्यमै तेस्रो स्थानमा नउक्लेला भन्न सकिदैन ।
नेपालमा बजाज किन सर्बाधिक सफल
बजार हिस्साका आधारमा भारतीय बजारमा चौथो हिस्सा ओगटेको बजाज नेपालमा भने पहिलो स्थानमा रहन सफल देखिन्छ । बजाजको पल्सर मोडल युवा राइडरमाझ अत्यधिक लोकप्रिय बनेका कारण यसले बजार हिस्सा बढाउन मद्दत गरेको हो । भारतको सन्दर्भमा भने यो मोडल त्यत्ति लोकप्रिय मानिदैन । त्यहाँ पल्सरभन्दा डिस्कभर र प्लाटिना जस्ता मोडल बढी बिक्री हुन्छन् ।
नेपाली बजारमा बजाज सफल हुनुको पछाडि बिक्री र बिक्री पछिको सेवाले समेत महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छ । देशका प्रायः सबैजसो शहरमा यसको थ्री एस भनिने सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स आउटलेट सञ्चालनमा छन् । स्पेयर पार्ट्सकै कुरा गर्नुपर्दा अन्य ब्रान्डको तुलनामा सस्तो र सर्बसुलभ समेत छ । त्यसैगरी कम्पनीले यो ब्रान्डको बजार प्रवद्र्धनका लागि समेत ठूलो रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ ।
बजाजको पल्सर मोडलले सेग्मेन्टमै सर्बाधिक पावरफुल बाइकको पहिचान बनाएको छ । नेपालका सडकहरु प्रायः अफरोडयुक्त र उकालो हुने हुँदा त्यस्ता सडकमा समेत यसले राम्रो पर्फमेन्स दिइरहेको छ । त्यसैले पनि पल्सरको बजार सहरदेखि ग्रामीण भेगमा समेत गुल्जार बनिरहेको छ । बजार हिस्साको कुरा गर्नुपर्दा बजाजले नेपालमा २५ प्रतिशत हाराहारीमा होल्ड गरेको छ ।
टीभीएस र हिरोका कारण होन्डा र यामाहाको बजार गुम्दै
कुनै समय भारतमा जस्तै नेपालमा पनि हिरोहोन्डा ब्रान्डका मोटरसाइकल सर्बाधिक बिक्री हुने गर्थे । भारतमा होन्डा र हिरो छुट्टिएँंगै हिरोको गतिमा एकाएक ब्रेक लाग्यो भने होन्डाले बजार हिस्सा बढाउँदै लग्यो । साइन र युनिकर्नजस्ता चर्चित मोडल उतारेको होन्डासँग डियो स्कुटर समेत भएको हुँदा बजार लिन गाह्रो भएन ।
साइन मोटरसाइकल आउँदाको शुरुवाती समयमा होन्डाले १२५ सीसी सेग्मेन्टमा हिरो सुपर स्प्लेन्डर र बजाज डिस्कभरको बजार खोस्दै यो सेग्मेन्टमा अग्रणी स्थान हासिल ग¥यो । अर्कातर्फ युनिकर्न र डियो स्कुटरले समेत तहल्का पिटिरहेकै थियो । त्यो समय होन्डाले बजाजलाई समेत उछिनेर पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो ।
हाल युनिकर्न र साइनको बिक्री प्रभाबित बन्दै गएपछि होन्डाको बिक्री स्कुटरमा बढी निर्भर बनिरहेको छ । होन्डाले पछिल्लो समय बजार हिस्सा गुमाउँदै लगेको छ । यसका पछाडि टीभीएसको आक्रामक आगमन र हिरोका नयाँ मोडल सार्बजनिक हुँदै जानु तथा ती मोडलले बजार लिनु प्रमुख कारण मानिएको छ । त्यस्तै स्कुटरमा एकछत्र बजार लिइरहेको होन्डालाई पछिल्लो समय टीभीएस र यामाहाले समेत राम्रै टक्कर दिइरहेको छ । जसका कारण पनि होन्डाको बजार निरन्तर ओरालो लाग्दो छ ।
त्यसैगरी स्टाइलिस र स्पोर्टी बाइकलाई बजारमा उतारेर युवाहरुको मन जित्न सफल यामाहाको बिक्री समेत टीभीएसको अपाचे सिरिज र हिरो एक्सपल्सका कारण प्रभाबित बनेको छ । यामाहाका एफजी मोडल युवा राइडरमाझ लोकप्रिय मोटरसाइकल हो । हाल यो मोडलको बिक्री पहिलेको तुलनामा निरन्तर कम भइरहेको छ । यद्यपि यामाहाले स्कुटर सेग्मेन्टमा भने बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको छ ।
टीभीएस र हिरोका नयाँ मोडलका कारण होन्डा र यामाहाले बजार हिस्सा गुमाउँदै लगेपछि हाल विद्यमान समिकरणमा समेत फेरबदल हुने देखिन्छ । यसअघि ठूलो अन्तराल सहित तेस्रो स्थान ओगटेको यामाहासँग टीभीएसले दुरी कम गर्दै लगेको छ भने अर्कोतर्फ हिरोले समेत बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको छ ।
हाल होन्डाले २० प्रतिशत, यामाहाले १५ प्रतिशत, टीभीएसले १३ प्रतिशत र हिरोले १० प्रतिशत हाराहारीमा बजार हिस्सा ओगटेको बताइएको छ ।
भर्चुअल लाइभमार्फत नेपाली बजारमा सार्वजनिक भयो प्रोटोन सागा
काठमाडौं – जगदम्बा मोटर्सले चर्चित मलेसियाली अटोमोबाइल ब्राण्ड प्रोटोनको &...
पुराना बाइकसँग नयाँ बाइक साट्ने अवसर : चल्दै छ टीभीएसको स्मार्ट एक्सचेन्ज
काठमाडौं – टीभीएस बाइक तथा स्कुटरको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले देशभर...
भोलि नेपाली बजारमा लन्च हुने भयो प्रोटोन सागा
काठमाडौं – नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले भोल...
थर्ड ह्विलले अनलाइनमार्फत बेच्न थाल्यो इलेक्ट्रिक स्कुटर, २५ हजार सम्म छुट
काठमाडौं – थर्ड व्हिलले नेपाली बजारमा दुई नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर उपलब्ध गर...
क्रसएक्स बाइकमा रमाएका निखिल
बाइकर्स नेपालका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सिओओ) हुन्– निखिल ठकुरी । ठकुरी पेसाले...
टाटा नेक्सन ईभी बन्यो २०२० मा भारतमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने इलेक्ट्रिक कार
भारतमा टाटा मोटर्सको टाटा नेक्सन ईभी सबैभन्दा बढी बिक्री हुने इलेक्ट्रिक कम्प्या...
तीन दिनमा १६ सय किलोमिटर ड्राइभिङ गरेँ
रिकन्डिसन बजारमा सर्बाधिक खोजिने ५ कार, जसको रिसेल भ्यालु उच्च छ
यसरी लिन सकिन्छ ५६ लाख ९० हजार मूल्यको नयाँ जापनिज पिकअप